Ifomu lesicelo se-Visa lase-US, Inqubo, Usifaka Kanjani isicelo se-Visa yase-US
UKUFANELEKELA I-VISA yase-US
I-Visa yase-US yezakhamizi zaseBrithani
I-Visa yase-US yezakhamizi zaseSpain
I-Visa yase-US yezakhamizi zaseFrance
I-Visa yase-US yezakhamizi zase-Italy
I-Visa yase-US yezakhamizi zaseJapan
I-Visa yase-US yezakhamizi zase-Australia
I-Visa yase-US yezakhamizi zasePortugal
I-Visa yase-US yezakhamizi zaseDashi
I-US VISA INFO
US Visa Online Uhlolojikelele
Isicelo se-Visa saseMelika
Inqubo Yokufaka Isicelo Se-Visa yase-US
Uhambo Lwebhizinisi oluya e-United States
Funda e-United States ku-US Visa Online
Izidingo ze-Visa Online zase-US
Izinyathelo Ezilandelayo - Ngemva kwe-US Visa Online
Kumele ubone iNew York
Kumele ubone uSeattle
Kumele ubone iLos Angeles
Kumele ubone iChicago
Kumele ubone iSan Francisco
Kumele ubone iMaui Hawaii
Kufanele Ubone iSan Diego
Kufanele Ubone eTexas
Kufanele Ubone Las Vegas
Umhlahlandlela Wokuvakasha Wamamnyuziyamu Ahamba Phambili e-USA
Umhlahlandlela Wokuhamba Weminyuziyamu Edumile eNew York
Umhlahlandlela Wokuhamba WamaPaki Kazwelonke Odumile
Umlando Wesithombe Senkululeko
IGreat Teton National Park
Izindawo eziphezulu zama-movie e-USA
Umngcele wezwe wase-USA uvulwa kabusha neCanada neMexico
Ukuvakashela eCalifornia nge-Visa yase-US Online
Ukuvakashela eHawaii nge-Visa yase-US Online
Ukuvakashela i-Las Vegas nge-Visa yase-US Online
Khetha UlimiisiZuluFrenchGermanItalianJapaneseSpanishNorwegianDanishDutchSwedishPolishFinnishGreekRussianIsiShayina (Esenziwe Lula)ArabicBulgarianCatalanIsiShayina (Esivamile)CroatianCzechFilipinoHebrewHindiKoreanPortugueseRomanianIndonesianLatvianLithuanianSerbianSlovakSlovenianUkrainianVietnameseAlbanianEstonianGalicianHungarianMalteseThaiTurkishPersianAfrikaansMalaySwahiliIrishWelshBelarusianIcelandicMacedonianYiddish-ArmenianAzerbaijaniBasqueGeorgianCreole HaitianUrduBengaliBosnianCebuanoEsperantoGujaratiHausaHmongIgboisi-JavaneseKannadaKhmerLaoLatinMaoriMarathi-MongolianNepaliPunjabiwaseSomaliTamilTeluguYorubaZuluAbantu abaningi isiMyanmar (isiBurma)ngesiChewaKazakhMalagasyMalayalamSinhalaSesothoSudaneseTajikUzbekAmharicneCorsicanFrisianHawaiianKurdish (Kirmanji)KyrgyzLuxembourgishIsiPashishiSamoanScottish GaelicShona-SindhiXhosa
Inqubo Yesicelo Se-Visa Yase-US
I-US ESTA, noma Uhlelo Lwe-elekthronikhi Lokugunyazwa Kokuvakasha, iyincwadi yokuhamba edingekayo ezakhamuzini zamazwe ase-ESTA Afanelekile (noma angenayo i-visa). Ukufaka isicelo se-ESTA kuyinqubo elula kodwa ethatha ukulungiswa okuthile.
I-ESTA US Visa, noma i-US Electronic System Yokugunyazwa Kokuhamba, yimibhalo yokuvakasha eyimpoqo yezakhamizi ze amazwe angenayo i-visa. Uma uyisakhamuzi sezwe elifanelekile lase-US ESTA uzolidinga I-ESTA US Visa ngoba ukuqeda or ukuhamba, noma nge ezokuvakasha kanye nokubuka izindawo, noma nge ibhizinisi izinhloso.
Ukufaka isicelo se-ESTA USA Visa kuyinqubo ebheke phambili futhi inqubo ephelele ingaqedwa online. Kodwa-ke kungumbono omuhle ukuqonda ukuthi yiziphi izidingo ezibalulekile ze-US ESTA ngaphambi kokuthi uqale inqubo. Ukuze ufake isicelo se-ESTA US Visa yakho, kuzofanela ugcwalise ifomu lesicelo kule webhusayithi, unikeze ipasipoti, imininingwane yokuqashwa kanye nezokuvakasha, bese ukhokha online.
Ngaphambi kokuthi uqedele isicelo sakho se-ESTA US Visa, uzodinga ukuba nezinto ezintathu (3): ikheli le-imeyili elivumelekile, indlela yokukhokha online (ikhadi lasebhange noma ikhadi lesikweletu noma i-PayPal) futhi kuvumelekile ipasipoti.
Ikheli le-imeyili elivumelekile: Uzodinga ikheli le-imeyili elivumelekile ukufaka isicelo se-ESTA US Visa application. Njengengxenye yenqubo yokufaka isicelo, kudingeka ukuthi unikeze ikheli lakho le-imeyili futhi konke ukuxhumana okuphathelene nesicelo sakho kuzokwenziwa nge-imeyili. Ngemuva kokugcwalisa isicelo se-US ESTA, i-ESTA yakho yase-United States kufanele ifike ku-imeyili yakho kungakapheli amahora angama-72.
Indlela yokukhokha eku-inthanethi: Ngemuva kokunikeza yonke imininingwane ephathelene nohambo lwakho lokuya e-United States, kudingeka ukuthi ukhokhe online. Sisebenzisa i-Secure PayPal gateway yokukhokha ukucubungula zonke izinkokhelo. Uzodinga i-Debit noma ikhadi lesikweletu elivumelekile (i-Visa, Mastercard, UnionPay) noma i-akhawunti ye-PayPal ukwenza inkokhelo yakho.
Iphasiwedi evumelekile: Kufanele ube nepasipoti evumelekile engaphelelwa yisikhathi. Uma ungenayo ipasipoti, kuzofanela ufake isicelo sayo ngokushesha ngoba isicelo se-ESTA USA Visa asikwazi ukuqedwa ngaphandle kwemininingwane yepasipoti. Khumbula ukuthi i-US ESTA Visa ixhumene ngqo ne-elektroniki nepasipoti yakho.
Ifomu Lokufaka Isicelo kanye nokwesekwa kolimi
Ukuqala uhlelo lwakho lokusebenza, iya ku- www.us-visa-online.org bese uqhafaza ku-Apply Online. Lokhu kuzokuletha ku-ESTA United States Visa Application Form. Le webhusayithi inikeza ukusekelwa kwezilimi eziningi ezifana nesiFulentshi, iSpanishi, isiNtaliyane, isiDashi, isiNorway, isiDanish nokuningi. Khetha ulimi lwakho njengoba kukhonjisiwe futhi ungabona ifomu lesicelo lihunyushwe ngolimi lwakho lwendabuko.
Uma unenkinga yokugcwalisa ifomu lesicelo, kunezinsizakusebenza eziningi ezitholakalayo zokukusiza. Kukhona ifayela le- imibuzo ejwayelekile ukubuzwa ikhasi futhi izidingo ezijwayelekile ze-US ESTA ikhasi. Uma udinga noma yiluphi usizo noma udinga noma yiziphi izincazelo kufanele uxhumane nathi usizo ukwesekwa nokuholwa.
Isikhathi esidingekayo ukuqedela isicelo se-ESTA US Visa
Kuthatha imizuzu eyi-10-30 ukuqeda uhlelo lwe-ESTA. Uma unayo yonke imininingwane usulungile, kungathatha okungenani imizuzu eyi-10 ukugcwalisa ifomu bese wenza inkokhelo yakho. Njengoba i-ESTA US Visa iyinqubo eyi-100% eku-inthanethi, imiphumela eminingi yezicelo zase-US ESTA ithunyelwa ngaphakathi kwamahora angama-24 kukheli lakho le-imeyili. Uma ungenalo lonke ulwazi olulungile, kungathatha kufika kuhora ukuqeda uhlelo lokusebenza.
Ifomu Lokusebenza Imibuzo Nezigaba
Nayi imibuzo nezigaba kwifomu lesicelo se-ESTA US Visa:
Imininingwane ekhombisa wena
Umndeni / isibongo
Amagama okuqala / anikezwe
Izwe AZALELWA KULO
Iphasiphothi Usuku Lokukhipha
Usuku Lokuphelelwa Amaphasiphothi
Esikhathini esedlule wake waba yisakhamuzi sakwelinye izwe? (uma uthanda)
Izwe Lobuzwe Bangaphambilini (kuyakhetheka)
Ubuthole kanjani ubuzwe obudlule (ngokuzalwa, ngokusebenzisa abazali noma okwenziwe ngokwemvelo)? (uma uthanda)
Ulayini wekheli lasekhaya ulayini 1
Umugqa wekheli lasekhaya 2 (ongakukhetha)
Idolobha noma iDolobha
Izwe noma iSifundazwe noma isiFunda
Ikhodi Leposi / Le-ZIP
Inombolo Yeselula / Ucingo
Imininingwane Yokuxhumana e-United States
Igama eligcwele loxhumana naye
Ulayini Wekheli Lokuxhumana 1
Ulayini Wekheli Lokuxhumana 2
Imininingwane yokuhamba nomsebenzi
Inhloso yokuvakasha (izivakashi, ezokuthutha noma ezebhizinisi)
Usuku lokufika olulindelekile
Unaye umqashi wamanje noma owedlule?
Umqashi noma Igama Lenkampani
Isihloko Somsebenzi (ongakukhetha)
Umugqa Wekheli Lomqashi 1
Umugqa Wekheli Lomqashi 2 (ongakukhetha)
Idolobha noma iDolobha Lokuqashwa
Izwe noma Isifunda Sokuqashwa
Wake waboshwa noma wagwetshwa ngecala eliholele ekulimaleni kakhulu kwempahla, noma ekulimaleni kanzima?
Wake wephula noma yimuphi umthetho ohlobene nokuba nezidakamizwa ezingekho emthethweni, ukuzisebenzisa noma ukusabalalisa?
Ngabe ufuna ukuzibandakanya noma wake wahlanganyela ezenzakalweni zamaphekula, ezobunhloli, zokucekelwa phansi, noma zokuqothulwa kohlanga?
Wake wakwenza ukukhwabanisa noma wazimela kabi wena noma abanye ukuthola, noma ukusiza abanye ukuthola, i-visa noma ukungena e-United States?
Ngabe njengamanje ufuna umsebenzi e-United States noma ngabe wake waqashwa e-United States ngaphandle kwemvume evela kuhulumeni wase-US?
Wake wanqatshelwa i-visa yase-US oyifakele isicelo ngephasiphothi yakho yamanje noma eyedlule, noma wake wenqatshwa ukwamukelwa e-United States noma wahoxisa isicelo sakho sokwamukelwa ethekwini lokungena lase-US?
Ngabe wake wahlala isikhathi eside e-United States kunesikhathi sokwamukelwa okunikezwe nguhulumeni wase-US?
Ngabe uke waya e-Iran, e-Iraq, e-Libya, e-North Korea, e-Somalia, e-Sudan, e-Syria noma e-Yemen ngomhlaka 1 Mashi 2011 noma ngemuva kwalokho?
Ingabe unokuphazamiseka ngokomzimba noma kwengqondo; noma ungumuntu osebenzisa kabi izidakamizwa noma umlutha; noma ngabe njengamanje unanoma yiziphi izifo ezilandelayo: Ikholera, iDiphtheria, Isifo sofuba esithathelwanayo, Inhlupheko, Ingxibongo, Umkhuhlane Ophuzi?
Ukufaka imininingwane yepasipoti
Kubalulekile ukufaka okulungile Inombolo yepaspoti futhi Ikhipha Izwe Lepasipoti ngoba isicelo sakho se-ESTA US Visa sixhunyaniswe ngqo nepasipoti yakho futhi kufanele uhambe nale phasipoti.
Bheka ikhasi lakho lemininingwane yepasipoti bese ufaka inombolo yepasipoti phezulu kuleli khasi
Izinombolo zepasipoti zinenhlamvu eziyi-8 kuye kwezingu-11 ubude. Uma ufaka inombolo emfushane kakhulu noma ende kakhulu noma engaphandle kwalolu hlu, kufana nokuthi ufaka inombolo engalungile.
Izinombolo zepasipoti ziyinhlanganisela yama-alfabhethi nenombolo, ngakho-ke qaphela kakhulu ngo-O no-0, uhlamvu I kanye nenombolo 1.
Izinombolo zepasipoti akufanele neze ziqukethe izinhlamvu ezikhethekile ezinjenge-hyphen noma izikhala.
Ikhipha Izwe Lepasipoti
Khetha ikhodi yezwe ekhonjiswe ngqo ekhasini lemininingwane yepasipoti.
Ukubona ukuthi izwe lifuna "Ikhodi" noma "Ukukhipha Izwe" noma "Isiphathimandla"
Uma imininingwane yepasipoti viz. Inombolo yepasipoti noma ikhodi yezwe ayilungile kuhlelo lokusebenza lwe-ESTA US Visa, ungahle ungakwazi ukugibela indiza yakho eya e-United States.
Ungathola kuphela esikhumulweni sezindiza uma wenze iphutha.
Uzodinga ukufaka isicelo se-ESTA US Visa esikhumulweni sezindiza.
Kungahle kungenzeki ukuthola i-US ESTA ngomzuzu wokugcina futhi kungathatha izinsuku ezifika kwezingu-3 ezimweni ezithile.
Kwenzekani lapho kwenziwa Inkokhelo
Lapho usuqede ikhasi leFomu Lokufaka Isicelo, uzothunyelwa ukuthi ukhokhe. Zonke izinkokhelo zicutshungulwa ngesango lokukhokha le-Secure PayPal. Uma ukukhokha kwakho sekuqediwe, kufanele wamukele i-US ESTA Visa yakho ebhokisini lakho lokungenayo le-imeyili kungakapheli amahora angama-72.
Izinyathelo Ezilandelayo: Ngemuva kokufaka isicelo nokwenza inkokhelo ye-ESTA US Visa
Sicela ufake isicelo se-ESTA US Visa 72 amahora ngaphambi kwendiza yakho.
Isicelo se-Visa sase-US
Kuvele iphutha, ngicela uzame futhi.
Imininingwane yakho uqobo ivinjelwe ngokuphephile yisoftware engu-Secure Sockets Layer (SSL)
US VISA ONLINE AMAZWE OKUFANELEKILEYO
INQUBO YOKUFAKA ISICELO SE-VISA yaseMelika
I-US VISA ONLINE IZIDINGO
UKUHAMBA KWEBHIZINISI NGATHI VISA ONLINE
FUNDA E-USA NGATHI VISA ONLINE
NGEMVA KWETHU I-VISA KU-INTANETHI- IZINYATHELO EZILANDELAYO
I-US VISA FAQ
UMHLAHLANDLELA WAMAMnyuziyamu AMAHLE E-USA
AMAMYUPHUSI AYADUMELA ENEW YORK
UMHLAHLANDLELA AMAPAKI KAZWELONKE ODUMILE
UMHLAHLANDLELA WESIBONELELO SENKULULEKO
AMAPHAKI AMAQINISO AMAHLE E-USA
IZINDAWO ZE-MOVIE EZIYINQABA E-USA
KUMELE UBONE IZIKHOMBISI
KUMELE UBONE IYORK ENTSHA
KUMELE UBONE ISIHLALO
KUMELE UBONE I-LOS ANGELES
KUMELE UBONE USAN FRANCISCO
KUMELE UBONE UMAUI HAWAII
KUMELE UMBONE USAN DIEGO
KUMELE UBONE I-TEXAS
Umshwana wokuzihlangula: I-Electronic US VISA ekhishwe yile webhusayithi yezentengiso isetshenziswa ngqo kuwebhusayithi ye-US Customs and Border Protection. I-US Customs and Border Protection (CBP) ayiqoka i-www.us-visa-online.org ngokuqondile, ngokungaqondile noma ngokukhethekile. Inkokhelo yobungcweti ikhokhiswa izinkonzo zethu kanye ne-Government Visa Levy kulabo abafaka izicelo kule webhusayithi.